Maxaa si aad u aragto In Provence France | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Maxaa si aad u aragto In Provence France
Haddii ay xawaaro gaabis ah nolosha aad raadineyso weeyna, ka dibna aad tahay meel sax ah. Picture; Fields ah lavender, ubaxyada, iyo geedo saytuun ah… Qadada Axada hoosteed ee hooska geedaha dayuuradaha oo kuyaala barxad tuulo ah, kariim cafe at cafe maraan weheliyaan a a a marayso iyada oo kaynta oo geedkii iyo Chestnut geedaha sida dheefshiidka a. Tani waa Provence – waxa si aad u aragto iyo sida ay halkaas ka heli.
Tani waa gobol ka mid ah farqiga badan iyo xiriir. Provence qariyaa ay kakanaanta ilxidh ka farxaan fudud ka yar. Waxay hoy u tahay midabada gaduud ah oo buuraha Esterel, dhadhanka tapenade, caraf ee rosemary, cadaynta lahjadda Provencal, iyo mistral, dabaysha hoos u dhabasho ka Alps. sida oo kale, hawlaha waa sida badan, sidoo kale! Ina keena aynu kaa caawin!
Provence - waxa si aad u aragto: Art
Laga soo bilaabo 1-dii March, 2019 in 5-tii January, 2020, de Carrieres ku Lumieres, ee meeshii laga soo qoday dhagax hore jeestay museum farshaxan immersive in Les Baux-de-Provence, marti carwo ka go'an in ay masterpieces Vincent Van Gogh ee.
Xiriirka Van Gogh ayaa la Provence ahayd mid u dhow. rinjiile qaatay laba sanno ee ugu danbeysay ee uu noloshiisa ee gobolka this Faransiis, barareyso iftiinka weyn iyo muuqaal. Waxa uu ka soo dhaqaaqay Paris Arles in 1888, sida uu rumeysan yahay in “mustaqbalka oo dhan farshaxanka cusub waxaa laga heli karaa Midi ah” oo la dhigay doonka ee Saint-Remy-de-Provence marka uu caafimaad hoos u dhacay. Labada meelahan waxyoonay qaar ka mid ah farshaxankiisa ugu caansan oo xididaysan uu style u gaar ah. Maaddaama ay caan bandhiga ee, waxaannu ku talinaynaa in aad ka hor ku saabsan Carrieres website Lumieres de.
Lyon ilaa Qiimaynta Tareenka ee Provence
Provence - waxa si aad u aragto: icon ee Marseilles casri ah
Tani museum cajiib ah baadhayaa ah taariikhda, dhaqanka, iyo ilbaxnimada ee gobolka Mediterranean dhex bandhigaa anthropological, qoqobada tahay bandhigyo, iyo filim. ururinta fadhiyaa geesi ah, dhismaha casriga ah loogu talagalay by-u dhashay dalka Algeria, Marseilles dhise bartay Rudy Ricciotti, iyo Roland CARTA. Waxaa lala by buundada vertigo soo fufaya u-qarnigii 13aad Fort St. John, kaas oo ay jiraan views stupendous ee Port Vieux iyo badda ku xeeran.
Provence - waxa si aad u aragto: dhisneyd
Tani waa a soo jiidasho Magaalada qarkii ee dooxada Verdon ah. dhisneyd, Provence waa magaalo qurxoon yar on qararka webiga Verdon waa meel xarun on Road Napoleon ah (Route Napoleon) hareereysan qurux badan, buuraha duurjoogta ah. Dadwaynaha dhagaxa caanka on taas oo taribuunka cibaadaysiga Notre Dame-du Roc, Provencal magaalada jir waa daridska ah haad picturesque cidhiidhi ah, vestiges deyr leh sida Pentagonale Tour ee (munaaraddii shan dhinac) iyo Gate Clock (albaab saacad), iyo Place qurux Marcel Sauvaire square - qalbiga tallaabo dhisneyd ee.
34 kabsarta Qaranka
34 Rue Qaranka waa guri ay Napoleon joojiyay in qadada on 3 March 1815 uu ka soo jasiiradda of Elba soo laabtay. Dadweynaha u furan, waa maanta Verdon Dhexe museum ee farshaxanka iyo dhaqanka oo caan ah.
Notre Dame-du Roc cibaadaysiga
Taageerayaasha Socodka waa in aan ka maqnaan socda marshabiyeediga in kor u keenaysaa in ay goobta cibaadaysiga Notre Dame-du Roc ka dib kaniisadda in ku dhawaad 30 daqiiqo. view The top ka badan ku xeeran baadiyaha waa cajiib ah!
Provence - waxa si aad u aragto: Popes The’ Palace ee Avignon
Ku qoran sida a World Heritage Site by UNESCO, madaxtooyada waa mid ka mid ah 10 ugu taxadiri booqatay France. Waxa uu helo 650,000 Kooxda martida ah sanadkiiba. Astaanta A dhabta ah ee saamaynta of Western kiristaanka ee qarnigii 14-. masterpiece 15,000km of taallo Tani waa qalcaddayda ugu weyn ee Dr Makumbe oo daarta weyn ee Gothic of Europe.
Benedict XII, kii dhiseen Old Palace si ay bari iyo xagga woqooyi,. Iyo ku xigeenkiisii ​​Clement VI wuxuu dhisay Qasriga Cusub koonfurta iyo galbeedka. munaaraddii hoy ah 11 Sheekooyinka Archives Waaxeedka. Its height of 52 mitir ka dhigaa aad wareer. Bal eeg kor u at laga Terrace ee Manutention waxbaa la ah shaneemo, oo aad arki doonaa waxa aynu uga jeednaa!
The qabanqaabisaa Palace xafladaha dhaqanka, theme tours, bandhigyo, iyo riwaayadaha sanadka oo dhan. It also houses within its walls the Musee de l’Oeuvre. In xagaaga, a bandhig farshaxanka weyn qaadataa ilaa Chapel Great halka barxadda Main uu noqdo ah masraxa furan-hawada la shows ka Avignon ah, Provence Tiyaatarka Dabaaldag abuuray by Jean Vilar in 1947.
Qiimaha Lyon illaa Avignon Tareenka
Provence - waxa si aad u aragto: Avignon, Orange, Chateauneuf-du-Pape
Qoto dheer u gal miyiga Faransiiska and discover Roman heritage among the rolling vineyards. Marvel at the Triumphal Arch and the Roman amphitheater. Dalka ka baxo iyada oo canab ah bacrin ah of Chateauneuf-du-Pape, Provence, iyo muunad raagay degaanka inta lagu guda jiro kalfadhiga ah dhadhankiisu. Bogi UNESCO World Heritage-ku qoran Pont du ka qabtid - biyomareenka ah Roman. Booqo magaalada Dr Makumbe ee Les Baux de Provence. Shaad sarsare oo ku yaal buuraha Alpines, iyo ogaan tuulooyinka Provencal of Gordes iyo Roussillon.
Sida loo Waxaa Hel?
by tareenka, Dabcan! safarka Rail in Provence waxaa bixiya tareenada mainline, oo ay ku jiraan TGV-xawaaraha sare, koonfureedna waxay ka bilaaban Paris, via Lyon, Avignon, Aix-en-Provence, iyo Marseilles, markaas xeebta Mediterranean (ma xawaaraha sare) si ay u Fiican, France. Waxaad tikidhadaada ku heli kartaa daqiiqado gudahood laga bilaabo Save A tareenka
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fprovence-see-get-there%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / ja ama / TR iyo luuqado badan.
#lavender #provence europetravel longtrainjourneys trainjourney traveltips khamri